JAY F LEONG (ခေါ်) ကိုဝင်းဆွေ
အသက် (၅၃) နှစ်
ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်၊ Pompano Beach နေ SUSAN LEONG ၏ ချစ်လှစွာသောခင်ပွန်း၊
Deerfield Beach နေ ဒေါက်တာဦးကြင်ဟိုး နှင့် ဒေါ်Grace တို့၏တူ၊ Delaware ပြည် နယ် Newark မြို့နေ မLily + Mr. Terence၊ Texas ပြည်နယ် Austinမြို့နေ Mr. Jim တို့၏ ချစ်လှစွာသောအကိုသည် ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၉)ရက် နံနက်(၆)နာရီ (၄၀)မိနစ် အချိန်တွင် ဖလော်ရီဒါနေအိမ်၌ ဘ၀တပါးသို့ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါကြောင်း ဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂဟအပေါင်းတို့အား အသိပေးအကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
ကွယ်လွန်သူ ကိုဝင်းဆွေသည်အချက်အပြုတ်အလွန်ကျွမ်းကျင်သော စားဖိုမှူးတဦးဖြစ်ခဲ့ ပြီး ၊ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ရှိမြန်မာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများအသင်း(UNOB) ၏အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။
နေ့ရက်။ ။ ၂၀၁၀ခုနှစ် ဇွန်လ(၂၂)ရက် အင်္ဂါနေ့။
အချိန်။ ။ ညနေ(၅)နာရီ
နေရာ။ ။ Forest Lawn North Funeral Home & Cemetery,
200 West Copans Road, Pompano Beach, FL 33064. Tel: 954-784-4000
ကွယ်လွန်သူအားရည်စူး၍ ကျန်ရစ်သူမိသားစုများက အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသူမိတ်သင်္ဂဟ များအား ညနေစာဖြင့် လှူဒါန်းေ​ကြွးမွေးပါမည်။
Asian Buffet 7:30PM – 10PM
240 South Federal Hwy, Deerfield Beach, FL 33441. Tel. 954-596-8988 (Hillsboro Blvd and US1 intersection)